Puntland oo amar kale Go’aano Culus ka qaadatay diidmada Shillin Soomaaliga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Guddigii dowladdu u xil-saartay ka tala-bixinta Arrimaha Sicir-bararka ayaa maanta oo soo saaray go’aanno lagu xallinayo Sicir-barar ka dhashay qiima dhaca iyo diidmada Lacagta Shilin Soomaaliga ah.
Guddiga oo shir jaraa’id ku qabtay Xarunta Wasaaradda Maaliyadda Puntland ee Garoowe ayaa soo jeediyay in dowladdu mushaharka 20% ku bixiso Shilin Soomaali, islamarkaana dekedda 20% lagu canshuuro Shilin, si loo xakameeyo Sicir-bararka.
Hoos ka Akhrsio Qoraalka kasoo baxay Guddiga loo xil saaray diidmada lacagta Shillinka.
1-In la socodsiiyo shilling Soomaaliga, go’aamada waxaa iska kaashanaya dowladda, ganacsatada iyo bulshada, iyadoo mid walba qayb loo jaan gooyay xarayn doono.
2-In Bangiga lagu xereeyo lacagta shilling Soomaaliga ee ku badan suuqa, dowladda ayaa bar xerayn doonta, halka barka kalena ay ganacsatadu xerayn doonaan.Dowladdu canshuurta dekedda Boosaaso 20% ku qaaddo Shilling Soomaali.
3-In dowladdu mushahar iyo adeegyada dowladda 20% ku bixiso Shilling Soomaali.
4-Waxaa meesha laga saaray kala duwanaanshanaha sarifka lacagaha qalaad iyadoo uu jaan goyn doono bangiga dhexe ee Puntland.Waxaa la joojiyey qulqulka lacagaha Shilling Soomaaliga ee u kala gooshaya gobolada Puntland, iyadoo loo xilsaaray bangiga dhexe ee Puntland.
5-In dowladdaha Hoose canshuuraha ku qaadaan Shilling Soomaaliga, gaar ahaan kuwa maalin laha ah.
6-In sariflayaashu ruqsad ka qaataan bangiga dowladda, ayna raacaan xeerarka bangiga si uusan u imaan khalkhal sarif.Shirkadaha isgaarsiinta waxaa loo fasaxay adeegyadii horay looga xayiray.
7-In shirkadaha Ganacsi ee gaar ka loo leeyahay, gaar ahaan korantada iyo biyuhu ka qaadaan macaamiishooda shilin Soomaaliga.
Maalmihii danbe Guud ahaan deegaanada Puntland waxaa ka taagnaa xaalad cakiran oo la xiriirta socon waaga shilin Soomaaliga iyo sicir barar wada jira taasi oo saamaynteeda ugu wayn ku dhacday danyarta iyo barakacayaasha kala duwan ee ku nool Puntland.